Maamulka Degmada Far Libaax oo Sheegay in ay wadaan Howlgalo daba socday dagaal ay ku qaadeen Al-Shabaab. | Mustaqbal Radio
Home - Wararka Somalia - Maamulka Degmada Far Libaax oo Sheegay in ay wadaan Howlgalo daba socday dagaal ay ku qaadeen Al-Shabaab.
Maamulka Degmada Far Libaax oo Sheegay in ay wadaan Howlgalo daba socday dagaal ay ku qaadeen Al-Shabaab.
Jamaal Cali Cabdulle Gudoomiyaha Far-libaax oo la hadlay Mustaqbal Radio ayaa sheegay in ciidamo katirsan Maamulka Hir-Shabeelle kuna sugnaa Bar Kontorool oo gawaarida ay ku baaraan Ciidanka ku sugan Far Libaax oo kamid ah Degmooyinkii uu dhawaan Magacaabay Madaxweynaha Hir-Shabeelle Cali C/llaahi Cosoble.
Gudoomiye Jamaal ayaa sheegay in labo kamid ah Ciidankii ku sugnaa goobta la wareeray in ay kaga geeriyoodeen, halka uu sheegay in Al-Shabaab ay gaarsiiyeen tiro intaa ka badan oo dhimasho ah inkastoo uusan Cayimin.
Ciidamada Hir-Shabeelle oo kaashanaya Maleeshiyaad Deegaanka ah ayuu sheegay in ay baaritaano ka wadaan Deegaanka Weerarka uu ka dhacay deegaanada ka akdhaw, waxa uu iska fogeeyey in ciidanka la wareegay ay ahaayeen Ciidamada Liyuu Booliis ee Dowlad Deegaanka Ismaamulka Soomaalida Ethiopia.
Waa uu sii hadlay Jamaal Cali Cabdulle Gudoomiyaha Far Libaax wuxuuna sheegay in Ciidamada la weeray in ay kamid ahaayeen Ciidankii dhawaan uu Madaxweyne Cosoble kala hadlay in ay Weeraraan Goobaha ay kasoo duulaan tagaan Xarakada Al-Shabaab.
Madaxweynaha Hir-Shabeelle Cali C/llaahi Cosob oo bartamihii todobaadkan tagay Far Libaax waxa uu ciidamada Hir-Shabeelle iyo kuwa Maamulka West-Land ay wada sameeyaan Howlgal wadajir ah kaa oo lagula dagaalamayo Al-Shabaab.
Xarakada Al-Shabaab ayaa Dagaalkii ka dhacay Far Libaax Ku sheegtay in ay ku qaadeen Ciidamada Liyuu Booliis, ayna gaarsiiyeen Khasaare dhimasho iyo Dhaawac sida ay Hadalka u dhigeen.